Microsoft Matimu e macOS achakurumidza kuwedzera rutsigiro rwekurekodha otomatiki | Ndinobva mac
Manuel Alonso | 04/05/2021 10:00 | Zvimwe Zvirongwa zveMac
Mazuva mashoma apfuura takakuzivisa nezvenhau idzo Microsoft Teams ichaita pakupera kwaAugust. Muzera ratiri uye apo misangano yepamhepo yave kunyanya kukosha nekuda kwedenda, hazvishamise kuti chaiko musangano mafomu ari kuisa mabhatiri. Microsoft ine maTimu uye yakafunga kuti ichi chirongwa chinofanirwa kuve chakakwana pane ese mapuratifomu uye macOS ndeimwe yacho. Iko kushanda kweiyo otomatiki zvinyorwa.
Denda rinogadzirwa neCOVID rakagadzira nzira nyowani yekutaurirana nguva dzose. Imwe nzira yekushanda uri kure sezvo imwe yenzira dzekudzivirira kutapukira iri kure nharaunda. Misangano yepamhepo ndiyo hwaro uye icharamba ichive nekuti kugadzirwa hakusi kudzikira. Izvi ndizvo zvakataurwa naTim Cook nguva pfupi yadarika uye saizvozvo avo vane mutoro paMicrosoft, ndosaka vachisimbisa Matimu eMac.
Through the Forum kubva kuMicrosoft Teams, yakave yakasimbiswa kune mumwe mushandisi iyo Microsoft urikushanda pane otomatiki musangano kurekodha. Iyi ficha yaizoitawo nzira yayo kune Mac vhezheni yeMicrosoft Matimu.
Mukuvandudza kunotevera, Zvinotaridza kuti musiki wesoftware anotendera vashandisi kuve neMicrosoft Teams otomatiki kutanga kurekodha kana musangano watanga Zvinotaridza senge zano rakakura kumatunhu edzidzo uko kwakanaka kuti misangano inyorwe otomatiki. Kana iwe uchiziva pamberi pekuti musangano unoda kurekodwa saka zvingave zvakanaka kuve nesarudzo paunenge uchironga musangano kuti utange otora zvinyorwa. Izvi zvinogona kukubatsira kuti usakanganwe kutanga kurekodha uye chengetedza imwe nguva nekuedza pasina kurangarira kuzviita nemaoko.
Chinhu chinonyanya kushamisa ndechekuti mubvunzo pamusoro peizvi zvinyorwa zvinyorwa yakaitwa muna 2018. Iye zvino angangoita makore matatu gare gare, isu tine mhinduro kubva kukambani. Tinogona kutaura zvatinoda pamusoro pemaforamu ekutsigira, asi zviri pachena kuti pakupedzisira vanopindura.
Zuva chairo harizivikanwe, asi zvinotaurwa kuti mashandiro acho achaitwa munguva pfupi iri kutevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Microsoft Teams ye macOS ichakurumidza kuwedzera rutsigiro rwekurekodha otomatiki
Ungashinga here kugadzira gomba muAirTags yako kuti uipfeke yakaturika? iFixit, hongu